राप्रपा एकता आज : RajdhaniDaily.com -
Home भर्खरै राप्रपा एकता आज
डेढ वर्षपछि महाधिवेशन, केन्द्रीय सदस्य अन्योल कायमै
काठमाडौं । कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र पशुपति शमशेर राणा तथा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी संयुक्त अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच आज बुधबार एकता घोषणा हुँदै छ । एकता घोषणा १२ बजे राष्ट्रियसभा गृहमा गर्ने तयारी छ । गत शनिबार राति तीन अध्यक्षबीचको एकता आधारपत्र सहमतिपछि एकता टुंगो लागेको हो । सहमतिअनुसार एकतापछि राप्रपामा तीन अध्यक्ष रहने छन् ।
राप्रपा संयुक्त प्रवक्ता जनकराज पाठकले अध्यक्षत्रयबीचको शनिबार रातिको सहमतिअनुसार मंगलबार दुबै राप्रपाको अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठकपछि एकता सहमति अनुमोदन गरिएको जानकारी दिए । एकतापछि ‘के कति संख्या केन्द्रीय समिति रहने ?’ भन्नेबारे मंगलबार रातिसम्म टुंगो लागेको छैन । तर, सहमति आधारपत्रअनुसार ‘क–कसलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने ?’ भन्ने जिम्मा तीन अध्यक्षबीच नै रहने छ ।
‘केन्द्रीय समितिको आकार कस्तो र कत्रो हुने ? अन्तिम टुंगो लागेको छैन, सहमती आधारपत्रअनुसार जिम्मेवारी तीन अध्यक्षलाई नै छ,’ प्रवक्ता पाठकले भने । आधारपत्रअनुसार हाल कायम तीनै दलका निर्वाचन चिह्न ६ महिनाका लागि स्थगन गरिएको छ । तर, झण्डा भने थापा नेतृत्वले प्रयोग गर्दै आएको राप्रपाकै राखिने भएको छ ।
यसैगरी, दुबै दलको विधान सामन्जस्य गरी एकीकृत नया“ विधान बनाउने सहमति बनेको छ । अहिलेका लागि भने राप्रपा विधानलाई अन्तरिम मानिएको छ । ६ महिनाभित्र विधान कमिटीले प्रस्ताव गर्ने छ । सहमतिअनुसार डेढ वर्षभित्र एकीकृत
महाधिवेशन गरिनेछ । २०४७ सालमा गठित राप्रपा यसबीच पटक–पटक फुट्दै र जुट्दै आएको छ । गणतन्त्रपछि समेत गणतान्त्रिक व्यवस्था स्विकार्न आनाकानी गर्दै आएका उनीहरू पछिल्लो समय राजसंस्थालाई नै अंगीकार गर्न तयार
राजसंस्थासहित हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनालाई अहिले दुवै दलले मूल सिद्धान्त मान्दै आएका छन् । यही निकटतामा मत नमिलेका कारण उनीहरूबीच २६ साउन २०७५ मा पार्टी एकता तयारी भए पनि अन्तिम समय विफल भएको थियो । त्यसको केही समयपछि राणा र लोहनी नेतृत्वको राप्रपाबीच मात्रै एकता भएको थियो ।
यसअघि, एकतापछिको दलमा अध्यक्ष ‘कति जना रहने ?’ भन्नेमा मत नमिल्दा एकीकरण सम्भावना टर्न पुगेको थियो ।
धनकुटा नगरमा निषेधित क्षेत्र घोषणा
प्रदेश १ Kumar Raut - August 13, 2020 0
धनकुटा । धनकुटा नगरपालिकाका ६ वटा वडामा आज बिहीबार रातिदेखि लागु हुँने गरी एक साता निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ । प्रमुख जिल्ला...
Breaking News Dhruba Lamsal - February 3, 2021 0